Intee in le'eg ayaa loo furi karaa dawada ama koro? Tilmaamaha cannabis-ka ayaa bilaabaya qiimaha.
Qiimaha Kuu furitaanka Ganacsiga Xashiishka
Waa maxay kharashyada ku baxaya furitaanka ganacsiga xashiishadda Illinois?
Xashiishadda xashiishadda ee loo yaqaan 'cannabis Illinois' waxay ku kacaysaa $ 500,000 ilaa $ 1,000,000 si loo furo.
Intee in la furi karaa?
Furitaanka a Dispensary Cannabis ee Illinois waxay noqon doontaa qaali sababtoo ah kharashka amniga, shuruudaha raasamaalka, shati bixinta, la tashiga iyo kharashaadka sharciga ah, kuwaas oo dhamaantood sii wada howlaha shirkadaada. Diyaar u noqo oo samee koox aad u wanaagsan iyo qorshe ganacsi oo hel aqoonyahanno ku habboon iyo agabyada aad ku guuleysato. Khubarada aan lahadalnay ayaa rumeysan in qiimaha lagu furayo ganacsigaaga xashiishada ee Illinois uu noqon doono inta udhaxeysa $ 400,000 ilaa $ 1,000,000 marka loo baahdo - iyo $ 1.5 milyan ilaa $ 3.0 malyuun xaga farsamada gacanta, oo kuxiran goobta & cabirka dhismaha banaanka. Gobol kasta waa xoogaa kala duwan, laakiin haddii aad dooneysid inaad furto xarun weyn ama aad ku koreyso Illinois, qawaaniinta iyo tirada shatiyadaha xadidan ayaa kor u kaca qiimaha si ka badan kan Galbeedka Xeebta.
sida loo bilaabo ganacsi xashiishad
Halkan waa Soo koobid Kooban Bilowga Qiimaha lagu furayo xashiishadda cannabis, ama farshaxanka ka soo kordhay Illinois:
Khidmadaha Codsi Sharciyeed
Khidmadaha La-tacaaliyeyaasha Xashiishadda
Xisaabaadka & Khidmadaha Kale ee Xirfadleyaasha
Kharashaadka wacyigelinta bulshada
Shuruudaha kufilan ee ku filan
Hanti Ma-guurto Dhismaha & kharashyada kirada go'an
Qiimaha ubaxa & Waxsoosaarka
Ujrada Cusboonaysiinta Khidmadaha Ruqsadda
Canshuuraha (IRC 280E)
Khidmadaha Xirfadeed ee socda
Qiimaha Furitaanka Ganacsiga Xashiishadda Ayaa La Sharaxay
Ujuurada ujuuro bixinta xashiishadda cannabis ama Craft Grow
Kuwani waa kuwa sida tooska ah uga baxa dhammaan kharashyadaada - ajuurada aad siiso gobolka Illinois. Waxaa lagu bixiyaa qaanuun waxayna leeyihiin hal lambar. Dhimatay way fududahay inaad gasho miisaaniyadaada, laakiin taasi waa kaliya isku socodka biyaha ganacsigaaga xashiishadda si loo furo korantada ama farshaxanka.
Loogu tala galay Khilaafaadka:
$ 5,000 lacag dalabka aan la soo celin karin.
$ 60,000 khidmad diiwaangelin ah (dib loo cusbooneysiin karo isla lacagtii labadii sanaba mar.)
Loogu talagalay Kooxda Farshaxan:
$ 40,000 oo ah khidmadda diiwaangelinta (waxay noqotaa lacag dib loo cusboonaysiin karo)
Goobta Xannaaneynta Xashiishkaaga ama Farshaxanimada
Hantida ma guurtada ahi waxay ku saabsan tahay meesha, markaa meeshaad ka furato arrimaha ganacsiga xashiishadda. Kirada, maaddaama ganacsiga xashiishadda aysan ku bixin karin amaahda guryaha hantida maguurtada ah, waa darawalka koowaad ee shey miisaaniyadda weyn ku leh ganacsigaaga xashiishadda.
Muuqaal labajibbaarane ah oo laga soo qaado shaybaarkaaga ayaa saameyn ku yeelan doona canshuurtaada labo-laboodka ah marka loo eego IRC 280E, iyo waliba kharashaadkaaga kirada. In kasta oo beeraleydu aysan ku dhicin IRC 280E, waxay u baahan yihiin in ay ka dhisaan dhismayaasha gudaha dhismayaasha nidaamyada loox xir xiran haddii ay doonayaan in ay sii wadaan tayada ugu sarreysa.
Waxaad u baahan tahay inaad miisaaniyad u sameyso oo aad qiyaasto meheraddaada xashiishadda si aad u sax ah, iyadoo la kaashanayo naqshadeeyayaal karti leh iyo qaab-dhismeedyo, si aad u go'aamiso ma aha oo kaliya baahiyahaaga bilawga, laakiin sidoo kale kharashyada hawl-maalmeedkaaga.
Intee in le'eg ayaa loo furi karaa
Filo qaddar ku saabasan kirada suuqa iyo arrimaha suurta galka u ah aagaynta. Nasiib wanaagse, dadka ka shaqeeya gobollada Illinois waxay leeyihiin lix bilood laga bilaabo abaalmarinta adeegsiga shatiyeysan ee shuruudaysan ee ay ku siin karaan gobolka cinwaankooda.
Intaas waxaa sii dheer, arrimaha amniga ee ku saabsan meesha ay daggan tahay waa in laga baaraandegaa oo lagala hadlaa dalabkaaga sababta oo ah amniga ayaa ah qodobo waa weyn marka la eego himiladiisa. Sidoo kale dhismayaasha dib-u-dhiska iyo astaamaha amniga ee loo baahan yahay in lagu daro is-weydaarsigaaga ama ganacsigaaga kobcinta ganacsiga, oo aan sidaas u adkeynin gobollada xeebta galbeed. Qiimaha alaabta, qalabka guryaha iyo qalabka (FF&E) ee ku baxa Illinois ayaa sare u kaca sababta oo ah heerka saxda ah ee amniga ee loo dhisay sharciga si looga hortago in maandooriyaha cannabis laga soo qaado silsiladda sahayda, ama boobka lacagta caddaanka ah kaliya isticmaalka ganacsiga cannabis.
Isku-darka Codsiga Kobcinta Illinois ama Craft Development
La taliyayaashu waxay kaa caawin doonaan inaad isku duubnaato Codsiga shatiga xashiishka, qorshe ganacsi, qorsheyaal maaliyadeed, qorsheyaal amni, qorshayaal sinnaan bulsheed, iyo waxyaabo kale oo fara badan. Arjiga dhammeystiran wuxuu u ekaan doonaa wixii lagu yaqaan qarnigii 20-aad inuu noqdo "Buug-telefoon". Odhaahdu waxay macnaheedu tahay xidhmooyin waraaqo ah oo ka imanaya codsi dhibco goos goos ah ayaa noqon doona mid weyn, laga yaabee boqolaal bog.
Sababta dhererka dalabka waxay la xiriirtaa balanqaadyo uu ganacsigaaga xashiishadda u sameynayo Gobolka Illinois (iyo gobolkaaga haddii aad meel kale joogtid) arjigiisa. Marka la bixiyo liisanka in lagu kobciyo ama lagu gudbiyo xashiishadda cannabis ganacsigaaga, markaa dhammaan shuruudaha iyo shuruudaha iyo ballanqaadyada ku saabsan ganacsigaaga xashiishadda ee aad ku sameysay dalabka runti waxay noqdeen shuruudaha ka shaqeynta ganacsigaaga!
Codsigaagu wuxuu u baahan yahay siyaasadaha tababarka shaqaalaha, qorshooyinka wacyigelinta dadweynaha, qaabeynta amniga iyo borotokoolka, howlaha shirkadeed ee cakiran, lahaanshaha iyo qandaraasyada maaliyadeed, iyo nidaamyada diiwaangelinta muhiimka ah iyo habraaca loo adeegsado kobcinta ama iibinta dadka waaweyn isticmaalka xashiishadda. Ma jiro ganacsi kale oo horay u qorsheeya oo aad u badan oo geli kara in la siiyo liisan si uu albaabadiisa u furo.
Haddii aad waligaa maqashay milkiil ganacsi oo ka cabanaaya xeerar aad u culus, weydii haddii ay ku jiraan ganacsiga xashiishadda.
Habka Codsigu wuxuu ku kici karaa tobanaan kun oo doollar waxaana si aad ah loogu sharxi doonaa hoosta. Waxa ugu muhiimsan ee ganacsigaagu sameyn karo markii la qaadanayo halista codsashada shatigiisa waa in ugu yaraan la iibsado codsi wanaagsan. Illinois waxay leedahay kursi aad u yar oo u furan mowjada koowaad ee warshadaha. Waxaa laga yaabaa inaad sameyso hirarka koowaad, ama kan labaad, ama saddexaad.
Haddii Illinois noqdo sida Colorado tirada shatiyada shatiyada iyo farsamada gacanta koritaanka waxay ubaahan tahay inay si xad dhaaf ah uga badato seddexleyda sharciga hada jira, taasoo micnaheedu yahay dadka kaliya inaad ubaahantahay inaad sii wado u ololeynta Gobolka si aad u cusbooneysiiso oo aad wax uga badasho sharciga ciyaartoy badan .
Qorshaha Ganacsiga Xashiishka (Kooxda)
Kumaa u shaqeeya? Sidaad hore u maqashay waxaan hore u sheegay Maqaallada Cannabis Legalization News (Arbacooyinka @ 2 pm CST), warshadaha xashiishka ayaa ah isboorti kooxeed - waxaa jira xaglo badan oo ay shirkaddaadu ku soo kordhin karto ama ka soo saari karto qiimaha dhirta. Markaad qoreyso qorshahaaga ganacsi, u adeegso maskaxda koox ahaaneed marka la isku darayo: dhaqankaaga, sharcigaaga muhiimka ah, canshuurta, amniga, iyo lataliyeyaasha hawlgalka, maalgashadayaashaada, iyo dabcan macaamiishaada.
Illinois waxay ku dartay jajab cusub oo ah qorshooyinka ganacsi ee xashiishadda dhaqameed ee ka imaanaysa gobolada kale ee dadka waaweyn adeegsadaan - sinnaanta bulshada. Waxaad u adeegsan kartaa yoolalka sinnaanta bulshada inaad u furto warshadaha xashiishadda kuwa sida xun u saameeya sharciyada daroogada 80-kii sano ee la soo dhaafay. Laga yaabee in shirkaddaada xashiishadda ay sameyn doonto qorshe ay ku adeegsaneyso 10 codsadeyaal sinnaanta bulshada ah oo waqti-buuxa ah si ganacsigaaga loogu ammaano in loo aqoonsado inay gacan ka geleyso fulinta ujeeddooyinka gobolka ee sharciga cusub ee dadka waaweyn ee adeegsiga.
Dabcan, qorshaha ganacsigu waa inuu lahaadaa dakhli dhaqameed iyo saadaalin kharash, iyo qorsheeye maaliyadeed oo khibrad leh ama CPA oo leh tafaariiqda hore, iyo rajo xashiishad, khibradda ayaa shirkaddaada ka heli doonta tirooyinka ugu kalsoon ee ugu badan. Qorshayaasha ganacsi ee xashiishadda, oo ka duwan qorshayaasha ganacsiga ee sida muuqata loo yaqaan 'vanililla', inta badan waxay u baahan yihiin inay wax ka qabtaan dhinacyada ganacsiga ay ka yimaadaan fulinta sharciga. Tusaale ahaan, waxaad lahaan doontaa kharashaadka u hoggaansanaanta si aad u xaqiijiso in hawlgalladaadu u hoggaansan yihiin sharciga cusub iyo isbeddelka sharciga ee howlahooda, iyo sida kuwa looga hadlo barnaamijyada kombuyuutarrada ama macluumaadka aadanaha loo sharxi karo.
Qareenadayada xashiishadda cannabis waxay u maleynayaan inay tahay qaanuun wanaagsan oo suul gal ah in la eego sida Gobolka u qiimeynayo codsiyada Xashiishadda cannabis ama farsamada gacanta lagu sameeyo liisanka oo si toos ah ula hadal dhinac kasta oo iyaga ka mid ah markii aad ka jawaabayaan wax kasta oo uu u baahan yahay dalabka, oo leh qorshayaal faahfaahsan iyo sharraxaad ah sababta ganacsigaaga uu ugu habboon yahay shaqada ganacsade ruqsad u haysta xashiishad ama shati.
Qorshaha Amniga ee Xashiishadda Cannabis ama Farshaxanka
Nabadgelyadu micnaheedu maahan in si qumman loo haysto qori. Amniga wuxuu isku daraa tikniyoolajiyada, qaabeynta qaab dhismeedka, iyo ilaalinteeda fulinta sharciga ugufiican ee lagu fulinayo nidaam haddii wax qaldamaan, yaa sameeyay, goorta la qabtey, iyo sida saxda ah ee ay udhacey oo dhan ayaa lagu qabtay qeexitaan sare, la daabacay, oo si dhaqso leh sharciga loo siiyaa. hay'adaha fulinta.
Amniga waxaa sidoo kale lagu dhisay meheraddaada qaab-dhismeedka qaabkeeda, socodka macaamiisha qulqulka, albaabbada, kaamirooyinka, nalalka laydhka, alaabada dhismaha, iyo xitaa siyaasadaha iyo nidaamyada tababarka shaqaalaha. Qaybta qorshaha amniga ee dalabkaaga ayaa lagu tiriyaa dhibco badan. Ganacsiyada Cannabis qaali ayey ku tahay in la furo, laakiin qiimaha bilowga ahi waa soo uruurinta qorshaha amniga saxda ah si ay ula kulanto oggolaanshaha Gobolkaaga iyo natiijada ugu sareysa.
Diiwaan Gelinta Qorshaha Si looga Hortago Bixinta Xashiishka ama Lacagta
Shirkado badan ayaa leh barnaamijyo milki iskaa wax u qabso ah oo ka soo ifbaxay kahor intaysan Illinois noqon xitaa gobolka xashiishadda caafimaadka. Kuwani waa meheradaha kalifaaca ah ee soo baxa maadaama xashiishaddu noqoto ganacsi sharci ah. Software noocee ayaad u isticmaali doontaa si aad ula socoto saadkaaga iyo iibka sheygu wuxuu ku xirnaan doonaa lataliyaha aad dooratay. Uma baahnid nidaamkaaga Barta iibka (POS) inuu noqdo mid dhab ah, oo fiican, POS.
Haddii qorshahaaga ganacsi uu ku jiro horumarinta tikniyoolajiyada noocan ah shanta sano ee qorshayaasha ah si loo abuuro durdurro dakhli oo dheeri ah adoo iibinaya rukhsadaha waxa ay dhisaan, markaa waa inaad i soo wacdid ilaa aad ka fikireyso inaad ka dhigto C #. Markaa waad shaqaalan kartaa qof kale ama waxaad bixin kartaa sabab faahfaahsan oo aad ku dooratay luqaddaas.
Adiga iyo qorshayaasha tababarka shaqaalaha iyo siyaasadaha waa inaad sidoo kale leedihiin sida ugu wanaagsan ee looga shaqeyn karo oo bixinaysa diiwaangelinta saxda ah ee xashiishadda. Nidaamyadan waa in la raacaa, oo lagu daraa tababbarka wax kasta oo software ah oo ay shirkaddaadu go'aansatay inay raacdo si ay uga caawiso raadraaca alaabada iyo iibkeeda. Aqoonta aad u leedahay nidaamkaaga ayaa muhiim ah si looga hortago cannabis in loo weeciyo silsiladda sahayda, ama in si xun loo socdo iyadoo la qaadanayo meel shelf oo alaab ay ahayd in si dhakhso ah loogu shubo.
Awoodda Maaliyadeed ee Naqshadeynta, Dhismaha & Ka shaqeynta Ganacsiga Xashiishadda
Codsiga helitaanka laysankaaga si loo abuuro ama loo bixiyo xashiishadda cannabis waxaa ka mid ah naqshado iyo qorshayaal badan oo xaruntaada iyo laga yaabee in ay wax ku jiraan iyo wax ku qoriddiisa. Naqshadeeyayaashu aad bay muhiim ugu yihiin sawirka waxayna u muuqdaan inay u gudbin karaan astaantaada cusub ee cannabis. Marka waa inaad iyaga u diyaariso naqshadaha guryahaaga, ama soo saarista badeecada ma noqon doonto mid raqiis ah. Laakiin haddii dalabkaagu guuleysto, ka dib wuxuu sii noqonayaa mid qaali ah maxaa yeelay naqshadaha hadda waxay u baahan yihiin in la dhiso oo la shaqaaleeyo.
Marka la helo ama aan la marin amaahda iyo deeqaha ay heli karaan “codsadayaasha sinnaanta bulshada ee aqoonta u leh,” dhammaan ganacsiyada cannabis shati u leh waxay u baahan yihiin inay muujiyaan awoodooda lacageed ee ay ku raacaan qaab dhismeedkooda oo ay uga dhigaan mid dhab ah. Qiimahaas waa mid gaar ah oo u gaar ah astaantaada gaarka ah, qaabeynta, iyo goobta ay ku taallo guryaha.
Haddii ganacsigaaga xashiishadda uu yahay mid aad qaali u ah, ama si wanaagsan loo maalgeliyey, waxaad u baahan tahay inaad caddeyso inaad haysato lacag aad ku fuliso naqshadaha iyo faahfaahinta dalabkaaga, oo ay kujirto maalgalinta mushaharka hawlgalladaada.
Buug-gacmeedka Shaqaalaha & Siyaasadaha Waxbarashada ee Looga Baahan Yahay Sharciga Cannabis Illinois
Shirkado badan ayaa dhista howlahooda shaqo iyo buugaagta gacanta markii ay weynaadaan, laakiin ganacsiyada cannabis waa inay lahaadaan meesha kahor intay albaabbadooda furin.
Tababbarka shaqaalahaaga xashiishaddu waa tallaabo kale oo loo dejinayo astaantaada waayo-aragnimada macaamilka, laakiin sidoo kale waxay soo jiidataa siyaasadahaaga amniga adoo baraya hab-dhaqannada si loo dhawro luqadda jirka qofka iyo ficilkiisa si loo xasuusto faahfaahin gaar ah haddii ay wax qaldamaan.
Tacliin dheeraad ah iyo tababar shaqaaluhu waxay wax ka qaban karaan siyaasadaha si loo yareeyo loona aqoonsado tuugada, isla markaana loo ilaaliyo shaqaalaha iyo macaamiisha meel amaan ah haddii dhac dhaco.
Dabcan, saaxiibbadu waa inay aqoon u leeyihiin ubaxa iyo soosaarkooda, astaamaha loo yaqaan 'terpenoid', iyo noocyada si ay ugala taliyaan macaamiisha nooca khibradda ay damacsan yihiin inay ka helaan cannabis.
Nidaamyada tababarka shaqaalahaaga waxay kaa caawin karaan inaad ka dhigto macmiilkaaga mid faraxsan, maamulayaasha gobolka ku faraxsan, ganacsigaagana ammaan.
Ka Qaybqaadashada Bulshada / Qorshaha Sinnaanta Bulshada ee Ujeeddooyinka Yoolalka Sharciga Xashiishka ee Illinois
In kasta oo qodobo badan aan si gaar ah loogu soo bandhigin wacyigelinta bulshada, iyo xaaladaha qaarkood qodobbada oo keliya in ay noqdaan gunno haddii ay dhacdo xiriir - taas macnaheedu waa in aad weli sameyso. Haddii aad xidhxidheen oo aadan ku darin, laakiin codsadaha kale ayaa sameeyay, nasiib wacan!
Maxuu sameeyaa ganacsigaaga xashiishadda si dib loogu celiyo? Waxaa jira waxyaabo badan oo aad sameyn karto si aad dadka wax u barto, ama aad u caawiso kuwa ay waxyeellada u geysatay dagaallada daroogada, ama haweeney kale, laga tirada badan yahay, halyeeyga ama kooxda naafada ah.
Ku bixi maalgalinta qorshahan hawlgelinta ee miisaaniyadda hawlgallada meheraddaada, maaddaama ay tahay kharash joogto ah oo ay shirkaddaadu sii waddo inay ku kobciso bulshada ay u adeegto.
Qiimaha loogu talagalay Shaqaalaha Xashiishadda
Maareeyayaasha kalamiyeyaasha waa in ay meheradda si habsami leh oo joogto ah u wadaan. Waa inay la macaamilaan shaqaalaha, macaamiisha, iibiyaasha, maamulayaasha gobolka, milkiilayaasha ganacsiga, laga yaabee xitaa maalgashadayaasha. Waxay u baahan yihiin baahi yarida warshadaha, laakiin la taliyayaashu waxay qiyaaseyaan in marka loo baahdo, kharashaadka shaqaale sannadeed ay ku bixi karaan tirada rubuc milyan ee doolar. Ha u qaadan ereyadeena eraygan, waa tan sawirka COVA ee kharashyada.
Qiimaha Loogu Tala Galay La-taliyaasha Xirfadlaha Cannabis
Waxaa jira labadaba bilow iyo kharashyo socda. Waxaad u baahan tahay qareen, xisaabiye, la-taliye hawleed, waana inaad si sax ah u caymis ku jirtaa. Miisaaniyadaha sanadlaha ah ee tiradan oo ah tobanaan kun oo doolar.
Qiimaha Kordhinta Ganacsiga Xashiishkaaga
Kaliya maahan SEO, wacyigelinta warbaahinta bulshada, naqshadeynta iyo youTubes, waxaad lahaan kartaa kafaalo-qaad dhacdooyinka wacyigelinta bulshada si aad u dhisto magacaaga. Waxaan ugu jecel nahay inaan kafaalo-qaadno aqoon-is-weydaarsiyo siminaaro iyo xaflado shaqo oo lala kaashanayo ururrada maxalliga ah, siyaasiyiinta, iyo shirkadaha xashiishadda. Xusuusnow inaad miisaaniyad u sameyso waxyaabahaas qorshooyinkaaga oo naftaada ka sii fogeyso tartankaaga.
Soo Koobidda Kharashaadka Lagu Gelinayo Suuqa Xashiishadda Sharciyeed ee Illinois
Marka hadda waad fahantay sababta aan u nidhi qiyaas ahaan $ 500,000 in laga furo xashiishadda cannabis gudaha Illinois. Xaqiiqdii maanaan galin dhamaan qarashka qalabka ee farshaxanka oo kora kaasoo kor u kici kara sababtoo ah mashiinada iyo HVAC kala duwan, iyo amniga, shuruudaha dhisida farsamada gacanta. Celceliskaasi wuxuu u badnaan doonaa qiyaastii $ 2,000,000 laakiin wuxuu kuxiran yahay astaamaha uu korayku doonayo inuu bixiyo.
by Lauryn | Aug 19, 2020 | 2020 Xakameynta Xashiishad Federal Cannabis Federal Project Marijuana, Dhaqdhaqaaqa Cannabis, Sharciyeynta Cannabis, Xashiishadda Kaarka, sharciyeynta wararka, NJ Marijuana New Jersey, Shuruucda Gobolka
NJ Marijuana | Sharci-gelinta Xashiishadda ee New Jersey NJ sharci-dajinta marijuana waxay kicin kartaa dhaqdhaqaaqa sharci-dejinta aagga saddex-gobol. Iyada oo New York iyo Pennsylvania ay ka shaqeynayaan dadaallada xashiishadda, xeebta bari waxay arki kartaa xoogaa dhaqdhaqaaq sharci-darro ah oo u dhaw ...
by Lauryn | Aug 9, 2020 | 2020 Xakameynta Xashiishad Federal Cannabis Federal Project Marijuana, Dhaqdhaqaaqa Cannabis, Sharciyeynta Cannabis, Cusboonaysiinta Wararka Cannabis, Ururada Xashiishka
Ururada Xashiishadda - Ururka shaqaalaha shaqaalaha ee loo yaqaan 'GTI Unite for rights' Ururada shaqaalaha Cannabis ayaa caan ka noqday. In kasta oo warshadda xashiishadda ay wali ku jirto xasilloonidooda isla markaana ay ganacsatada rajo ka qabaan isku dayayaan in ay ku dhegaan wax kasta oo cagaarka cagaarka ah ee ay awoodaan, haddana xuquuqda badan ee shaqaalaha waa la ...
Cusboonaysiinta Wershadaha Cannabis oo la Weynaaday
by Lauryn | Jul 28, 2020 | 2020 Xakameynta Xashiishad Federal Cannabis Federal Project Marijuana, Cusboonaysiinta Wershadaha Xashiishadda, Sharciyeynta Cannabis 2020 Sharciga Dib-u-habeynta Maandooriyaha Keith Stroup NORML, Sharciyeynta Cannabis, Cusboonaysiinta Wararka Cannabis
Cusboonaysiinta Wershadaha Cannabis ee la Weeraray Brad Spirrison of Grown Inagu soo biiri doono si aan uga wada hadalno isbeddelada warshadaha cannabis. Saxafi iyo xiriiriyaha aasaasaha shirkadda Grown In, Brad Spirrison wuxuu nagala hadlayaa siyaasada Chicago iyo mustaqbalka xashiishadda gobolka Illinois. Ka dhagayso PodCast ama ...
Wargayska 'Cannabis' ee 'Illinois Cannabis News' oo ay weheliso Chilllorida iyo CannaKweens
by Lauryn | Jul 27, 2020 | 2020 Xakameynta Xashiishad Federal Cannabis Federal Project Marijuana, Ganacsiyada Cannabis Cancarta, Sharciyeynta Cannabis 2020 Sharciga Dib-u-habeynta Maandooriyaha Keith Stroup NORML, Sharciyeynta Cannabis, Cusboonaysiinta Wararka Cannabis, Wargayska 'Cannabis' ee 'Illinois Cannabis News' oo ay weheliso Chilllorida iyo CannaKweens, sharciyeynta wararka, Sharci, Shuruucda Gobolka
Illinois Cannabis News with Chilllorida Illinois news cannabis news waa nooc ka mid ah addinka hadda. Inbadan waxay sugaan inay ka maqlaan Wasaarada Beeraha in hadii codsiyadooda laysanka la aqbalidoono ama la diidi doono. Justine Warnick iyo Cole Preston oo ka socda ...
Xaraashka Xakameynta Xashiishadda iyo Xashiishka Cannabis
by Lauryn | Jul 27, 2020 | Sharciyeynta Cannabis, Xaraashka Xakameynta Xashiishadda iyo Xashiishka Cannabis
Xaraashka Cannabis iyo Sublimation-ka Xashiishadda Cannabis iyo Sublimation-ka Xashiishadda cannabis ayaa ku soo kordhayay caan ka ah xamaasada cannabis. Alaabada sida loo yaqaan 'weed weed' waxay u adeegsadaan tikniyoolajiyadan inay ku daaweeyaan xashiishaddooda oo badanaa soo saarta ubax xoog badan. Luc ...
Xashiishad iyo Autism
by Lauryn | Jul 14, 2020 | Isbahaysiga Cannabis Autism ee Ohio, Cusboonaysiinta Wararka Cannabis, sharciyeynta wararka, Caafimaadka Marijuana, Bukaanka Waqti Dhiman
Cannabis iyo Autism Cannabis iyo Autism - laba mowduuc oo taxaddar leh oo u baahan dariiq dheeri ah. In kasta oo ay jiraan daraasado loogu talagalay iyo ka soo horjeedda isticmaalka xashiishadda si loo daaweeyo astaamaha cudurka Autism, macaamiil badan ayaa rumeysan in cannabis uu yahay daaweynta ugu wanaagsan uguna nabdoon. Tiffany ...
Telefoon: (309) 740-4033 || E-mail: tom@collateralbase.com
150 S. Wacker Drive, Suugaanta 2400,
Phone: 312-741-1009 || E-mail: tom@collateralbase.com